Fironana teknolojia 6 amin'ny 2020 Tokony ho Fantatry ny Marketer rehetra | Martech Zone
Tsy takona afenina fa ny fironana ara-barotra dia mipoitra miaraka amin'ny fanovana sy fanavaozana ny teknolojia. Raha tianao hisongadina ny orinasanao dia mitondrà mpanjifa vaovao ary ampitomboy ny fahitana an-tserasera dia mila mavitrika amin'ny fanovana teknolojia ianao.
Mieritrereta fironana teknolojia amin'ny fomba roa (ary ny fomba fisainanao no hampisy fahasamihafana eo amin'ny fampielezan-kevitra mahomby sy kalikety ao amin'ny analytics):
Na mandray fepetra hianarana ireo fironana sy hampiharana izany, na avela any aoriana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao momba ny fironana teknolojia enina vaovao amin'ny faravodilanitra ho an'ny 2020. Vonona ny hanomboka? Ireto ny paikady sy fitaovana ilainao hitontosa ny tany amin'ity taona ity.
Fironana 1: Omnichannel Marketing dia tsy azo atao intsony, tsy ilaina izany
Hatramin'izao, ny mpivarotra dia nahomby tamin'ny fifantohana tamin'ny fantsom-piarahamonina vitsivitsy handefasana sy hirotsahana. Mampalahelo fa tsy izany intsony no zava-misy amin'ny taona 2020. Amin'ny maha mpivarotra orinasa anao dia tsy manam-potoana handefasana atiny amin'ny sehatra rehetra ianao. Raha tokony mamorona atiny manokana ho an'ny fantsona tsirairay ianao dia afaka repurpose atiny ary apetaho amin'ny fantsona rehetra. Tsy hanamafy ny fandefasan-kafatra marika fotsiny io fa hitandrina ny orinasanao hifandray sy hifandray amin'ny vondrom-piarahamoninao amin'ny Internet.
Omnichannel marketing dia ahafahan'ny mpihaino anao mitsidika tsy tapaka ny fantsonao. Ny vokany?
Ny varotra amoron-tsiraka dia mitentina 2 tapitrisa tapitrisa dolara eo ho eo.
Vonona ny hahita marketing omnichannel amin'ny hetsika? Topazo maso hoe ohatrinona ny mpivarotra lehibe any Etazonia, Nordstrom, mampihatra marketing an-tserasera:
Ny Nordstrom Pinterest, Instagram, ary Facebook ny kaonty dia misy lahatsoratry ny vokatra azo tsindriana ary fitaomam-panahy avy amin'ny fomba.
Rehefa mizaha ny kaonty media sosialy any Nordstrom ny olona dia afaka miantsena amin'ireo lahatsoratra mitarika azy ireo mankany amin'ny tranokalan'ny Nordstrom izy ireo.
Raha vantany vao tonga eo amin'ilay tranonkala izy ireo, dia afaka mandahatra fotoana fanendrena, mampidina ny rindranasa Nordstrom, ary mahazo fidirana amin'ny programa valisoa mahatoky.
Omnichannel marketing dia mametraka ny mpanjifa ao anaty tsingerin'ny votoatiny, serivisy ho an'ny mpanjifa, varotra ary valisoa.
Mafimafy sy mazava ny hafatra:
Amin'ny taona 2020, mila mifantoka amin'ny marketing omnichannel ianao. Ny fiakaran'ny marketing nomerika sy ny media sosialy dia namorona ny filàna fitaovana fanontana mandeha ho azy. Raha ny marina dia tsy manam-potoana handefasana isan'andro amin'ny sehatra maro ireo tompona orinasa sy mpivarotra.
Ampidiro: Famoronana votoaty, fanovana habe ary fanontana fitaovana avy amin'ny PosterMyWall. Tsy vitan'ny hoe afaka mamorona atiny ianao, fa afaka manova azy io amin'ny refy isan-karazany toy ny lahatsoratra Instagram na sary zaraina Facebook rehefa mandeha. Bonus? Maimaimpoana. Saingy tsy ampy ny mamorona atiny fotsiny, te-hamoaka azy koa ianao.
Mba hitsitsiana fotoana dia ampifanaraho miaraka ny famoronana atiny sy ny asa famoahana azy. Amin'ny fotoana iray, azonao atao ny mamorona votoaty hita maso sy manomana azy hamoaka azy ho azy isaky ny fantsona. Amin'ny alàlan'ny fanovana ny haben'ny famolavolana mandeha sy famoahana automatique amin'ny tsindry totozy tsotra dia manangona fotoana, vola ary mitazona ny marikao hifanaraka.
Omnichannel marketing dia mitovy amin'ny omnipresence an-tserasera, ary fanovana teknolojia 2020 tsy azonao odian-tsy hita.
Fironana 2: Ny hoavin'ny varotra horonantsary
Ny marketing amin'ny horonantsary dia baomba enti-milaza tato ho ato, saingy mendrika ny fiheverana rehetra ve izany? Mihevitra fa antsasaky ny olona an-tserasera no mijery horonantsary isan'andro, araka ny antontan'isa momba ny varotra horonantsary avy HubSpot, Lazaiko fa mitabataba io Eny. Karazana atiny inona no jeren'ny olona? Tsy manjaka intsony ny Youtube satria mitombo laza ny dokam-barotra amin'ny Facebook, ny Instagram Stories ary ny Live.
The lakilen'ny marketing video mahomby dia ny personalization. Tsy liana intsony ny olona hijery horonantsary voadio tsara. Fa kosa, mangetaheta votoatin'ny horonan-tsary mifanaraka amin'ny tombontsoany manokana izy ireo. Lahatsary manaikitra dia fomba tsara hifandraisana amin'ny mpihaino anao ary hizara lafiny akaiky kokoa ny marikao.
Ary aza manahy fa tsy mila mpanao horonantsary matihanina ianao hamoronana votoaty mahasarika. Azonao atao ny mamorona mora foana ny horonan-tsary mifandraika sy azo avy amin'ny rangotra, na avy môdely video ao amin'ny PosterMyWall. Mamorona horonantsary handanjalanjana ny hafatry ny marika, hampiroborobo ny fanombohana vokatra na ampahafantaro ny mpihaino anao momba ny vaovaon'ny orinasa.
Ity no mora toy ny PosterMyWall:
Mikaroha modely video hahitanao izay mifanaraka amin'ny tonony sy ny hafatry ny marikao
Tsindrio ny endrika hamolavolana ny modely
Ampiasao ny tonian-dahatsoratra hanamboarana mora ny kopia, ny loko, ny endritsoratra ary ny endriny
Mizarà mivantana amin'ireo fantsom-piarahamoninao avy amin'ny PosterMyWall
Ao anatin'ny dingana tsotra fotsiny dia manana horonantsary misy marika ianao hizarana! Miaraka amin'ny atiny horonan-tsary fohy sy mahasarika, dia mitazona ny tenanao ho lohalaharana amin'ny sain'ny mpihaino anao ianao, ary toerana mety hisy izany.
Fironana 3: Ataovy misy amin'ny Google Marketplace ny vokatra
Ny fanovana teknolojia vaovao no lohahevitra niadian-kevitra ho an'ny mpivarotra: manosika ny vokatra mankany amin'ny Google Marketplace. Manohitra ny mpanohitra fa nanambola vola be izy ireo hananganana tranokala mahasarika taratry ny marika sy ny mombamomba ny orinasan'izy ireo. Ny fanosehana ny vokatra mankany amin'ny Google dia manala ny fahafahan'ny mpitsidika gaga amin'ny tranokala fonosana tonga lafatra. Ny vokany? Fihenan'ny fifamoivoizana an-tranonkala.
Tsy maintsy mijery mihoatra an'ity metric ity ianao raha hijery ny sary lehibe kokoa eto. Te-hivarotra ve ianao? Sa te hanana tranokala be mpitsidika? Mazava ho azy fa mila varotra ianao, fa tsy varotra iraisana iray akory, tadiavinao ny mpamerina tsy mivadika, izay no antony namoronanao ilay tranokala mahafinaritra, sa tsy izany? Right.
Raha tokony hihevitra ny Google Marketplace ho toy ny fahafatesan'ny tranokalanao ianao dia hevero ho fantsona iray hafa hampahafantatra ny marikao izany. Raha toa ny marika hafa miala sasatra amin'ny fanantenana manosika ny vokatra mankany amin'i Google ary very ny fifamoivoizana, afaka mitsambikina ianao ary mitanisa ny vokatrao, mahazo varotra ary mampitombo ny marikao.
Ny zava-misy azonao atao ny mitanisa ireo vokatrao amidy amin'ny alàlan'ny Google ao anatin'ny minitra vitsy monja dia nahatonga azy io ho fitaovana marketing mora (sy maimaim-poana!) Izay tsy azonao atao ny tsy miraharaha.
Toy izao no azonao atao:
Voalohany, mankany amin'ny Kaonty Google My Business, izay ahafahanao mitanisa ireo vokatrao, antsipirian'ny vokatra, manampy sary ary manomboka mivarotra ao anatin'ny minitra vitsy. Mazava ho azy, te hanamafy ny feon'ny marika ianao, ny fandefasan-kafatra ary ny marikao avy amin'ny tranokalanao sy ny fantsona media sosialy. Midika izany fa tsy te-hanipy hodgepodge lisitra vokatra misavoritaka ianao. Mitondrà ny Google Marketplace amin'ny fomba itiavanao ny fivarotana an-tserasera ary apetraho amin'ny sary, fandikana ary ny famaritana ny vokatra.
Fironana 4: Markup Schema Favorite SERPS sy Snippets manan-karena
Ny marketing nomerika dia tsy azo lavina fa miankina amin'ny SEO (Search Engine Optimization). Amin'ny taona 2020, mila manao mihoatra noho ny misafidy teny lakile kendrena ianao ary mampiasa lahatsoratra alt sary hitondrana fivezivezena amin'ny tranonkala. Eny, mbola mila mampiasa fomba fanao tsara indrindra amin'ny SEO ianao, saingy izao dia mila manaraka dingana lavitra kokoa ianao ary mamorona sombin-javatra manan-karena amin'ny Schema Markups.
Ny sombin-javatra manan-karena dia misy microdata, antsoina hoe markup Schema, izay milaza mazava tsara momba ny motera fikarohana izay momba ny pejin-tranonkala tsirairay. Ohatra, rehefa miditra ao amin'ny bara fikarohana an'i Google ny "mpanao kafe" ianao, iza amin'ireo valiny ireo no hitanao fa mety hikitika ny olona:
Famaritana mazava momba ny vokatra, vidiny, naotin'ny mpanjifa ary hevitra
Famaritana meta tsy mazava no nesorina tampoka tao amin'ilay pejy, tsy misy naoty, tsy misy vidiny, tsy misy fampahalalana
Raha hitanao ny safidy voalohany dia marina ny anao. Amin'ny taona 2020, ny motera fikarohana lehibe rehetra, anisan'izany ny Google sy Yahoo !, dia manaiky ny schema schema sy ny sombin-tsoratra manankarena rehefa misintona SERPs (Pejy Vokatra Search Engine).
Inona no azonao atao? Manana safidy roa ianao: ampiasao Schema.org mamorona snippets manankarena, na manararaotra ity fitaovana maimaimpoana avy amin'ny Google ity. Ankehitriny, ny pejin'ny vokatrao tsirairay dia feno fampahalalana mifandraika, izay mampitombo ny fahitana ny orinasanao.
Fironana 5: AI dia hanamora ny Hyper-Personalization
Feo toa oxymoron? Amin'ny lafiny iray dia, saingy tsy mampihena ny maha-zava-dehibe azy io. Rehefa miresaka momba ny personalization amin'ny sehatry ny marketing izahay, dia mandinika ny fomba hanomezana traikefa manokana ho an'ny mpanjifa.
Aleo hazava aho: AI tsy hanimba ny marika rehefa ampiasaina tsara. Fa kosa, hanampy amin'ny famoronana traikefa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa manokana sy tsara kokoa izy io. Rehefa dinihina tokoa, reraky ny haino aman-jery tsy miankina ny mpanjifa. Rehefa dinihinao ny zava-misy fa manaparitaka azy ireo ny haino aman-jery manenika Doka 5,000 isan'andro, mora ny mahita ny antony maha-reraka azy ireo. Raha tokony hanampy ny tabataba ianao dia azonao atao tsara ny mampiasa AI mba hananganana traikefa manokana anao manokana.
Miaraka amin'ny fiovan'ny teknolojia sy ny fidiran'ny rindrambaiko AI, ny mpivarotra dia afaka miditra amin'ny mpanjifany amin'ny sehatra akaiky kokoa. Iray amin'ireo fomba tsara indrindra azonao ampiasana AI hahazoana manokana ny fanangonana angona momba izay atiny ankafiziny.
Diniho tsara ny famakafakana tranokala sy ny fomba fijerinao ny haino aman-jery sosialy. Inona avy ireo lamina mipoitra? Nanangana olona mpanjifa ianao hamoronana marika sy sary miresaka amin'izy ireo. Na izany aza, tsy ampy fotsiny izany raha mila fifandraisana marina amin'ny mpanjifa ianao.
Izany no mahatonga ny marika lehibe mampiasa AI satria miaraka aminy…
Netflix dia afaka maminavina izay tian'ny mpampiasa tsirairay hijerena mifototra amin'ny tantarany.
Under Armor dia manamboatra regimen ara-pahasalamana miorina amin'ny fahazarana mihinana, matory ary mahasalama ny mpampiasa.
Chatbots dia afaka manontany ireo mpitsidika ao amin'ny pejy Facebook an'ny marika raha toa ka mila fanampiana amin'ny fikarohana vokatra na serivisy manokana izy ireo.
Fehiny: mba hahazoana olona manokana amin'ny mpanjifanao amin'ny taona 2020, mila fanampiana kely avy amin'ny AI ianao.
Fironana 6: Tsy hanolo ny atiny hita maso ny fitadiavana feo
Ny fiakaran'ny fikarohana ao am-peo dia manova ny atiny azo vakiana ho lasa format ho an'ny motera fikarohana ny mpivarotra. Ny fikarohana ny feo dia fironana amin'ny radarin'ny tsirairay, ary ara-dalàna izany:
Ny antsasaky ny fikarohana dia hatao amin'ny alàlan'ny fikarohana amin'ny feo amin'ny taona 2020.
Mety tsara raha mampifantoka ny sainao amin'ny fikarohana ny feo, fa raha manao izany dia aza diso ny fieritreretana fa ny atiny hita maso dia mofo efa antoandro. Raha ny marina, ny mifanohitra amin'izany no izy. Mila porofo? Antsoina hoe Instagram izy io ary Mpampiasa mavitrika mavitrika miisa 1 arivo tapitrisa hatramin'ny Janoary 2020.
Ny olona tsy azo ihodivirana dia tia votoaty hita maso. Fa maninona no tsy izy ireo? Miaraka amin'ny sary dia afaka:
Mianara fahaiza-manao na fampahalalana mifandraika amin'ny zavatra mahaliana azy ireo
Manandrama fomba fahandro vaovao na mamorona zavakanto sy asa tanana
Jereo ny horonan-tsary mampihetsi-po sy mampahalala
Mitadiava marika sy vokatra vaovao
Na dia tsy niova aza ny maha-zava-dehibe ny marketing amin'ny maso amin'ny taona 2020, ny fahatongavan'ireo hevitra vaovao dia mety hitaona ny mpivarotra hiala amin'ny famoronana atiny hita maso. Izany dia tsy azo ihodivirana fa hanimba. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fampidirana atiny maso miavaka amin'ny paikadinao rehetra.
Mba hanampiana anao dia feno sary miaraka amin'ny sary ny PosterMyWall trano famakiam-boky, modely video, ary an'arivony modely namboarina ho matihanina. Amin'ity rindrambaiko famolavolana maimaimpoana ity dia azonao atao ny manamboatra modely amin'ny fanovana lahatsoratra, loko ary sary mba hifanaraka amin'ny marikao. Na, azonao atao ny mamolavola lahatsoratra amin'ny haino aman-jery sosialy, sary an-bilaogy, sary vokatra namboarina ary fananana fampiroboroboana avy hatrany amina rindrambaiko fanovana mora ampiasaina.
Aza adino ny mamerina mamorona ireo sary hita maso ireo mba hametahana ny varotra omnichannel anao. Ohatra, azonao atao ny mamorona lohateny famoahana bilaogy ary manova ny habeny ho lasa pin Pinterest na Instagram post ary voila, manana atiny maso mahavariana ianao amin'ny fantsona maro!
Ataovy mety aminao ny fanovana teknolojia
Amin'ny taona 2020, mila mandefa harato malalaka ianao hitondrana ny mpanjifa, hanangana fahatsiarovan-tena amin'ny marika ary hampitombo ny orinasanao. Mba hanaovana izany dia ilaina ny mijanona ho malefaka sy mialoha ny fironana. Ny lakilen'ny marketing amin'ny atiny dia ny fahaiza-mampifanaraka, satria ny mpivarotra mahatohitra ny fanovana dia mety hivoatra ny tsena raha tsy misy azy ireo. Arakaraka ny fisokafanao sy ny fihetsiketsehanao amin'ny fanovana teknolojia no ahafahanao mampiasa azy ireo hahasoa anao. Ary rehefa manao izany ianao? Eny, tsy misy mahasakana anao!
Tags: fironana marketingomnichannelfironana teknolojiany fironana
Christina Lyon dia mpanoratra, mpitoraka bilaogy ary mpitendry mozika avy amin'ny masoandro miorina amin'ny SoCal. May izy noho ny fanampiana ny orinasa an-tserasera hivoatra amin'ny fanaovana kopia marketing. Rehefa miala eo amin'ny latabany izy dia tia mamaky tantara foronina, mandehandeha amoron-dranomasina ary milalao mozika i Christina.